Ny zanakavavin'i Fetty Wap, 4 taona, Lauren Maxwell dia voalaza fa maty noho ny aritim-piterahana nahafaty azy - Pop-Kolontsaina
Ny zanakavavin'i Fetty Wap, 4 taona, Lauren Maxwell dia voalaza fa maty noho ny aritim-piterahana nahafaty azy
Voalaza fa namoy ny zanany vavy, Lauren Maxwell, ilay rapper, mpihira ary mpamoron-kira, Fetty Wap, noho ny olana ara-pahasalamana nahazo azy hatramin'ny nahaterahany. Lauren, efa-taona, dia maty vokatry ny aritim-po tao amin'ny aretim-po vokatry ny fahasarotana tamin'ny tsy fahatomombanan'ny fo am-bohoka, araka ny voalaza tao amin'ny taratasim-pahafatesana.
rehefa misy bandy mibanjina ny masonao nefa tsy mijery lavitra
Nanana olana ara-pahasalamana izy tamin'ny fotoana nahaterahany ary ny fitempon'ny fony tsy tapaka dia nitarika ny fahafatesany. Ny antontan-taratasy iray azon'ny TMZ dia mampiseho fa nodimandry tamin'ny 24 Jona 2021 tao an-tranony tao Riverdale, Georgia i Lauren.
Lauren Maxwell, zanakavavin'i 4 taona #FettyWap , efa nodimandry. Andao isika rehetra haka fotoana fohy ary handefa vavaka @fettywap sy ny fianakaviany noho ny fahaverezan'ny zanany vavy.
- IG: PRETTYSHADESOFMELANIN ✨ (@p_s_o_m) 3 aogositra 2021
Fetty Wap sy ny sakaizany Lisa Pembroke dia nanome voninahitra ny zanak'izy ireo tamin'ny herinandro lasa. Sambany izy ireo nizara ilay vaovao nahavaky fo tamin'ny vahoaka.
Vao haingana ilay mpanao rap no nampita fa nodimandry ny zanany vavy herinandro vitsivitsy lasa izay. Nanokana fampisehoana ho azy koa izy tao amin'ny Rolling Loud. Gaga ireo mpankafy azy tamin'ny fomba nahafahany nanao fampisehoana nandritra io fotoana nahory io.
anatiny sy ivelany locus ny fanaraha-maso ohatra
Fianakavian'i Fetty Wap
Fetty Wap miaraka amin'i Lauren Maxwell zanany vavy farany (Sary avy amin'ny Distractify)
Teraka i Willty Junior Maxwell II i Fetty Wap tamin'ny 7 Jona 1991. Nanjary nalaza izy taorian'ny famoahana ny laharam-pahamehany Trap Queen, izay laharana 2 tamin'ny tabilao US Billboard Hot 100 tamin'ny taona 2015. Narahin'ny tokan-tena roa hafa, 679 ary ny fombako.
Ilay mpanakanto malaza dia ny ray manan-janaka enina. Ny zanany vavy voalohany Aydin dia teraka tamin'ny 2011 fony izy niaraka tamin'i Ariel Reese.
Mizara zanaka vavy roa amin'i Lezhae Zeona izy - Zaviera, teraka tamin'ny 2015, ary Zy, teraka tamin'ny taona 2018. Ny zanany vavy fahefatra Khari dia teraka tamin'ny volana martsa 2016 ary nizara azy tamin'ny mpilalao sarimihetsika Masika Kalysha izy.
Ny zanaka vavy fahadimy an'i Fetty Wap, Amani, dia teraka tamin'ny volana aprily 2016 raha niaraka tamin'i Elaynna Parker izy. Izy no lasa rain'ny zanany vavy fahenina, Lauren, tamin'ny taona 2017 niaraka tamin'i Turquoise Miami.
Ny modely Alexis Skyy dia nilaza tamin'ny taona 2018 fa i Fetty dia zanakavavin'ny Alaiya zanany vavy. Nandà ireo fitakiana ireo ilay 30 taona ary nilaza fa tsy ray niteraka an'i Alaiya izy fa toy ny raim-pianakaviana ho azy. Nambara taty aoriana fa i Brandon Medford no tena rain'i Alaiya.
inona no mahatonga anao ho lasa mpanoratra iray tokana
Vakio ihany koa: Iza ny Eileen Cure? LPL Financial dia nandrehitra mpanolotsaina ara-bola taorian'ny TikTok malaza viraliny mampiseho ny fomba fanaony amin'ny fanavakavahana
5 Times WWE Superstars nipoitra tamina horonantsary mozika malaza
Ny NJPW tsara indrindra amin'ny alina 10 vokatry ny Super Juniors (5/28/17): baomba mandondona ny fotoana vs. ilay olon-dratsy ary maro hafa
Ny lafiny maizina sy mampidi-doza amin'ny vanity maoderina
Impiry moa i Randy Orton no Tompondakan'ny ekipa tag?
Zavatra 5 angano nataon'i Vince McMahon ivelan'ny WWE
Jake Roberts sy DDP dia nandatsaka 'f-baomba' an-taonina maro, very 15 lbs ny Triple H, miresaka matoatoa i Renee Young
Niala nenina ny tonian-dahatsoratr'i Jeff Wittek taorian'ny nivoaran'ny teny N nandritra ny fandraisany ny hevitr'i Ethan Klein farany teo
Folo amin'ireo latabatra, tohatra ary seza lehibe indrindra amin'ny lalao WWE History
Tononkira, horonan-tsary ary rohy mp3 misy ny lohahevitra Randy Orton
Avy aiza i MrBeast ny volany? Fisitrihana lalina ao amin'ny fanjakan'ny YouTube 23 taona
Naoty ny 10 Fifaninanana tsara indrindra amin'ny tantara NXT
ny fomba hanombohana amin'ny olona iray hafa
iza no caitriona balfe nanambady
mampiaraka vehivavy iray misy olan'ny fandaozana
sarimihetsika halloween tsara indrindra Michael myers
zavatra horesahina amin'ny namanao
ny lefona britney ve no miambina ny zanany?
inona no tokony hotadiaviko amin'ny lehilahy